Dawladda Puntland ayaa digniin u dirtay Maamulka Soomaaliland taas oo la xariirta inaan diiwaangalinta doorashada Soomaaliland la keni karin dhulka Puntland gaar ahaana Gobolka Cayn. – Djiboutination
HomeNEWS2 Dawladda Puntland ayaa digniin u dirtay Maamulka Soomaaliland taas oo la xariirta inaan diiwaangalinta doorashada Soomaaliland la keni karin dhulka Puntland gaar ahaana Gobolka Cayn. Dawladda Puntland ayaa digniin u dirtay Maamulka Soomaaliland taas oo la xariirta inaan diiwaangalinta doorashada Soomaaliland la keni karin dhulka Puntland gaar ahaana Gobolka Cayn.
- January 7, 2016 - in NEWS2, Politics 1974 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Kornel Cabdiraxmaan Axmed oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Daraawiisha ee Gobolka Cayn ayaa sheegay in maalmahaan ay la socdeen qorshayaal gudiga doorashooyinka Soomaaliland wadeen kuwaas oo ah inay diiwana galinta keenaan Gobolka Cay, waxaana sarkaalku intaa raacshay inayan keeni karin Gobolka Cayn diiwaangalintaas.
Waxaa uu sheegay inay ka hortagayaa hawlahaas, waxaana uu dhanka kalena digniin u diray xubanha kasoo jeeda Buuhoodle ee Soomaaliland la socda, isagoona sheegay in qorshaha ay wataan aysan marna aqbali doonin.
Ugu dambayntii waxaa uu si xad u sheegay Kornel Cabdiraxmaan Axmed inay shacabka ka difaacayaan daandaansiga, horayna marnaba Gobolka Cayn aysna uga dhicin doorashada Soomaaliland lagana hortagayo haatan.
Previous article ;-Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku wajahan Magaalada Boosaaso iyoAmaanka oo loo Adkeeyay … Next article Djibouti cuts ties with Iran: government About the author djibouti